Izintshisekelo ezi-4 mayelana nokushisa komhlaba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
El ukufudumala kwembulunga yonke kwamanje kungenye yezinsongo ezinkulu isintu esiye sabhekana nazo izinkulungwane zeminyaka. Kuyinkinga, okuyindida ukuthi, sesiyibhebhethekisile futhi siyazibhebhethekisa ngenkambiso yethu yansuku zonke, noma ngabe ukusebenzisa imoto, ukugawulwa kwamahlathi noma ukungcolisa.
Ngokulandelayo ngizokutshela Izintshisekelo ezi-4 mayelana nokushisa komhlaba ukuze ukwazi ukuqonda kangcono ukuthi isimo sinzima kangakanani.
3 Ukunyamalala kwamachibi
4 Amanzi ansundu
I-Thawing ingenye yemiphumela eyingozi kakhulu yokushisa komhlaba, hhayi nje ngoba wonke lawo manzi ancibilikile aya olwandle, abangele ukuthi izinga lawo likhuphuke, kepha futhi Kwenza impilo ibe nzima kakhulu ezilwaneni ezihlala kulezi zindawo eziphilayo, njengamabhere asezindaweni eziphakeme.
Futhi sengathi lokho bekunganele, lapho iqhwa liyancibilika izidumbu ezingenampilo zivezwa, ngazo, Izifo Ezithathelwanayo Okucatshangwa ukuthi Zingaphela Zingase Zivele.
Amadolobha ayishumi nantathu kwangu-XNUMX abaluleke kakhulu emhlabeni atholakala ngamamitha ambalwa kakhulu (ngisho namasentimitha) ukusuka olwandle. I-Alexandria, California, New York, phakathi kwabanye, ine- ingozi enkulu kakhulu yezikhukhula ezinkulu, okungaba ngamamitha amabili ngokuya nge-NOAA.
Kuze kube manje, Amachibi ayi-125 ase-Arctic anyamalele njengomphumela wokufudumala kwembulunga yonke. Futhi ukuthi i-permafrost eyayingaphansi nje kwabo ibilokhu incibilika, lapho, amachibi amuncwa ngumhlabathi. Izilwane ezihlala kula manzi zisengozini yokuqothulwa.
Njengoba izinga lokushisa lomhlaba linyuka, amachibi azoqala ukuba nezinto eziningi eziphilayo, njenge ulwelwe. Ngenxa yalokho, izitshalo ezihlala ekujuleni zizoqala ukushabalala ngenxa yokushoda kwelanga. Ngokwenza njalo, izilwane ezizidlayo kuzofanela zivumelane nokujwayela ukudla ezinye izinto uma zifuna ukusinda.
Ukufudumala kwembulunga yonke kuyinkinga ethinta sonke. Uma sinakekela iplanethi, imiphumela yayo kungenzeka ingabi yimbi kangako.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Izintshisekelo ezi-4 mayelana nokushisa komhlaba
UJuanjo Castro Rios kusho
Ngubani obhale lokhu? Akayena isazi sezulu, akunjalo? Hhayi udokotela wesimo sezulu, akunjalo? Uzobe engayifundelanga i-physics empilweni yakhe futhi ngeke adlule kunoma yiliphi i-Faculty of Environmental Sciences. Akungimangazi ukuthi noma ngubani akudingeki azi lutho ngalokhu unombono wokuthi unawo. Abaphenyi kumele bakhulume ngokoqobo njengoba kunjalo, ngaphandle kokukuhlobisa ngezinto ezingakafakazelwa, futhi, ngokombono wami, akukaze kuboniswe. Iningi lenza izindaba ezethusayo, ezigcina inzalo futhi zivikele izibonelelo zabo, njengama-NGO amaningi, athatha izigidi eziyi-150 ngonyaka owedlule ngezifundo ezingenangqondo. Kepha eMeteorologiaenlared? Akufanele baye lapho bengazi khona, noma okungenani basho ukuthi ngubani osayina i-athikili, yini imithombo yabo noma bathole ukuthi kungumbono womuntu siqu, ngakho-ke singayisusa ezintandokazini zethu.
Phendula uJuanjo Castro Ríos
Uqinisile: imithombo ilahlekile. Ngivele ngiwagqoke.
Ngiyaxolisa ukuthi ibingenandaba nawe.